Ukushisa kwe-thermal aln aluminium nitride ceramic sheet China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-Advanced Ceramic Plate > I-Ceramic Substrate > Ukushisa kwe-thermal aln aluminium nitride ceramic sheet
I-aluminium nitride ishidi le-ceramic
I-Alumina nitride ceramic ngokujwayelekile kwamakhemikhali Al 65.81%, N34.19, Ukushisa kwalo okushisa kune-aluminium, ukushisa okukhulu okushisa 2200 ℃. I-anti-corrosion resistance in the aluminium encibilikisiwe nensimbi gallium arsenide, ikakhulukazi i-aluminium encibilikisiwe
I-alN ceramic substrate ene-conductivity ephezulu yokushisa engaphezu kwama-170W / m. K, ukukhululeka okuphezulu, ukulahlekelwa phansi kwe-dielectric, ukuthungathwa okuhle kanye nezinye izinto ezihle kakhulu. I-substrate ye-AlN iyona engcono kunazo zonke zezinhlobo eziningi zezimboni zokushisa ukushisa kwezimboni zamandla omshini ophezulu wamandla kanye nezixhobo zokusebenza. ezifana ne-high-frequency equipment substrate, i-high power transistor module substrate, amasiphayidi aphakeme kakhulu,
Iphepha lokushisa le-Ceramic Isrmal Insulation